ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး Kaspersky Rescue Disk 10 ~ မိုးညိုသား
3:58 AM နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
(14.9.2012 / မှတ်ချက်။ ။ Minus ကလင့်ကို ကျနော်ဖျက်ထားလိုက်ပါပြီ.. အောက်က Update ထွက်လာတဲ့ ဗါးရှင်း အသစ်ကိုပဲ ဒါရိုက်လင့်ကနေ ဒေါင်းယူကြပါဗျာ.. 260 MB ရှိပါတယ်..)
5/11/2012 နေ့က နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ.. 267 MB ရှိပါတယ်.
မှတ်ချက်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ. ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးကိုပဲ သုံးပါတယ် အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ပါတယ်.. Recycler Virus ကိုလည်း ဒီကောင်လေးနဲ့ ရှင်းနိုင်ပါတယ်.. virus ရှိနေတဲ့ flashdrive တွေကို usb port မှာထိုးပြီးတော့ အပေါ်က အဆင့်တွေအတိုင်း သူ့တစ်ခုတည်းကိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက် scan ဖတ်ပေးလိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် ရပါပြီ... ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ flashdrive ထဲမှာရှိတဲ့ Recycler Virus ဖိုင်ကို အလွယ်တကူပဲ ဖျက်နိုင်ပါပြီ...